काठमाडौं- दूषित पर्यावरण र खानपानलगायत कारणले क्यान्सर रोगीको संख्या बढ्न थालेको छ । क्यान्सरको जोखिम कम गर्न के खानुपर्छ ?
लघुवित्तकी कर्मचारी तामाङको हत्यामा संलग्न पक्राउ
प्रहरी टोलीले लावतीलाई आज अपराह्न जङ्गलमा लुकेर बसेको अवस्थामा फेला पारेको हो । लावतीको साथबाट तामाङबाट लुटिएको नगद तथा तामाङको ह ...
कम्प्यूटरमा स्मार्ट बन्न प्रयोग गर्नुहोस यस्ता 'सर्टकट की'
पाउनुहोस् सधै काम लाग्ने केहि सर्टकट किहरु र बचाउनुस तपाईंको समय ...
नेपालक म्युनिस्ट पार्टीले पार्टीका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज तथा जनकपुर ब्युरो सदस्य कुमार पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेपछि ...
भिटामिन र खनिज पाइने खानाहरु !
कपर दिमागका लागि एकदमै जरुरी हुन्छ । हामीले च्याउ, केराउको गेडामा कपर पाइन्छ। दिमागको तागत बढाउन आइरन पनि जरुरी छ । हामी बदाम, द ...
विश्वको सबैभन्दा धेरै पैसा कमाउने अनलाइन गेम पब्जी
विश्वको सबैभन्दा धेरै पैसा कमाउने अनलाइन गेम पब्जी मोबाइल गेम बनेको छ । चीन बाहिर मात्रै पाँच करोड दैनिक सक्रिय प्रयोगकर्ताहरु रहे ...
आजको मौसम यस्तो रहनेछ